Jiri Atụmatụ na Ngwá Ọrụ Ndị a Iji merie Ọrụ Ahịa Gị | Martech Zone
Jiri Atụmatụ na Ngwaọrụ ndị a Ga-emeri Ọrụ Ahịa gị
Wenezdee, Machị 21, 2018 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi ọrụ ịzụ ahịa gị nke ọma, ị ga-arụ ọrụ ka mma maka ịhazi ụbọchị gị, nyochagharị netwọkụ gị, mepụta usoro ahụike, yana iji usoro nke nwere ike inye aka.
Nwee Teknụzụ Na-enyere Gị Aka Ichekwasị Obi
Maka na abu m teknụzụ, aga m ebido ya. Amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na enweghị m Brightpod, sistemụ m na-ebu ụzọ rụọ ọrụ, chịkọta ọrụ dị iche iche, ma mee ka ndị ahịa m mara etu otu anyị na-eme. Akụkụ ikpeazụ dị oke egwu - achọpụtara m na mgbe ndị ahịa hụrụ ọkwa nke ọrụ na ugbu a na ntanetị, ha na-alaghachi na arịrịọ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ọ na-enye m ohere dị egwu mgbe nsogbu dị mkpa bilitere iji soro ndị ahịa m na-arụ ọrụ ma ha chọrọ ịbawanye mmefu ego iji dozie ha, ma ọ bụ na anyị gbanwere ihe ndị ka mkpa ma weghachite oge ruru na ụbọchị ndị ọzọ.
Yana njikwa oru, njikwa kalenda anọwo na-akatọ. Enweghị m nzukọ nzukọ ụtụtụ (gụọ maka nke a ma emesịa) yana ana m amachi nzukọ ịkparịta ụka n’ịkparịta ụka n’otu ụbọchị n’izu. M hụrụ n'anya na-ezute ndị mmadụ, ma oge ọ bụla m na-n'ikwe n'aka… ọ a na-eduga ndị ọzọ ọrụ m efere. Rakwado kalenda m dị oke mkpa na mmeri oge iji nweta ọrụ na-eweta ego na-akpata.
Tinye n'ọrụ usoro ihe omume ngwa iji kparịta ma setịpụ oge nzukọ. Azụ na ozi nke kalenda kalenda bụ igbu oge ị chọghị ọzọ. Enwere m nke etinyere na nkata nkata nke saịtị m nwayọọ.
Mezue Ihe Omume Kachasị Mgbagwoju Anya Gị n'ụtụtụ
M na-elele email m kwa ụtụtụ. O bu ihe nwute, onodu a akwusighi ubochi dum. Tinye oku ekwentị na nzukọ a haziri ahazi, ana m echekarị ma m nwere ihe ọ bụla emere ụbọchị niile. Aga m akpọ mmanụ nke etiti abalị na-anwa ijide ma kwadebe maka echi. Enweela m ụbọchị m - na-arụ ọrụ na email na ozi olu naanị mgbe m mechara ọrụ ndị dị mkpa maka ụbọchị ahụ.
Ọtụtụ nnyocha e mere egosiwo na ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịnwa ịrụ ọrụ ndị dị mkpa n'oge ụtụtụ. Site na iji atụmatụ a, ndị na-ere ahịa nwere ike itinye uche ha ma wepụ ihe ndọpụ uche (M na-arụkarị ọrụ n'ụlọ na ụtụtụ na ekwentị m na email gbanyụọ). Bugharịa obere ihe omume gị mgbe 1:30 pm gachara, ị ga-ebelata nchekasị gị, belata mmetụta nke ike ọgwụgwụ, ma mee ka ọtụtụ ọrụ ndị dị mkpa ga-eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma.
N'ikpeazụ, ọ bụ sayensị! Mgbe ụbọchị na-arụpụta ọrụ na ụra abalị, ụbụrụ mmadụ nwere ogo dị elu nke dopamine. Dopamine bụ ngwakọta nke na-eme ka mkpali dịkwuo mma, nwere ike ịkwalite ike, ma melite iche echiche siri ike. Mgbe ị rụchara ọrụ ndị bụ isi, ụbụrụ gị na-ewepụtakwu ihe norepinephrine, ihe okike nke na-eme ka elekwasị anya, na-emewanye arụpụta ma na-ebelata nrụgide. Ọ bụrụ na ị na-adọga itinye aka na ọrụ kwa ụbọchị, ma na-arụ ọrụ n'ime abalị na-emetụta ụra gị, ị nwere ike ị na-eteta ụra na enweghị ume. Dezie dopemine gị iji kpalite mkpali gị!
Ekwela ka ọnwụnwa - kwụghachi gị ike ịrụ ọrụ site n'inyocha na-elekọta mmadụ media na email mgbe ị na-eme na gị ụtụtụ oru ngo ma ọ bụ oru ngo. Ga-eju otú ụbọchị gị ga-adị ukwuu!
Kọwaa Ihe Ndị Dị Mkpa
Anọ m na-eche echiche otú m si abịaru nnukwu ọrụ. M na-amalite na ebumnuche, mepụta ụzọ iji mezuo ebumnuche ndị ahụ, emesịa m ga-arụ ọrụ na usoro ọ bụla. Ka mụ na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ, ana m enwekarị obi ike na nlekwasị anya ha ma ọ bụ nchegbu ha na anyị anaghị arụ ọrụ. Enwere m nchegbu banyere Nzọụkwụ 1, ha na-ajụ maka Nzọụkwụ 14. Ana m echegharị mgbe niile ka ndị ahịa m lekwasị anya na ọrụ dị n'aka. Nke a apụtaghị na anyị anaghị adị gara gara, anyị na-enyocha usoro anyị oge niile gbasara ebumnuche ma na-agbanwe ya.
Gịnị bụ ihe mgbaru ọsọ gị? Ha kwekọrọ n'ihe mgbaru ọsọ nke nzukọ gị? Ihe mgbaru ọsọ gị ọ ga-ebuli akara gị? Ọrụ gị? Ego gị na ego gị Malite na ebumnuche gị n'uche na ịkọwa ihe aga-eme iji merie ihe ndị ahụ na-eweta nghọta na ụbọchị ọrụ gị. Nke a afọ gara aga, M bee isi mmekọrịta, mkpa ihe, na ọbụna oké na-akwụ ụgwọ ahịa mgbe m ghọtara na ha na-adọpụ uche m si m ogologo oge ihe mgbaru ọsọ. O siri ike iso ndị mmadụ nwee mkparịta ụka ndị a, mana ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nke ọma.
Ya mere, kọwaa ihe omume gị dị iche iche, chọpụta ọrụ ndị ga-eme ka ị rute ebe ahụ, chọpụta ihe ndọpụ uche na-egbochi gị, ma dọọ ịdọ aka ná ntị na idebe usoro nna gị ukwu! Mgbe ị doro anya ihe kpatara na ị na-eme ihe ị na-eme kwa ụbọchị, ị na-enwekwu mkpali ma ghara inwe nrụgide.
Gbanwee ihe niile ị na-eme
Elelị ịme ihe ugboro abụọ, ana m eme ya. A bụ ihe atụ… na ndụ nke na-arụ ọrụ na onye ọ bụla nke m ahịa, M na-anọkarị oge na-arụ ọrụ ha esịtidem isiokwu mkpara na search engine njikarịcha. Kama ịkọwa ihe ngosi oge ọ bụla, enwere m isiokwu ole na ole m na-edobe na saịtị m nke ha nwere ike zoo. Ihe nwere ike iwe ụbọchị, ọ na-ewe otu awa ma ọ bụ karịa n'ihi na edere m ihe ederede zuru ezu maka ha.
Ndebiri bụ enyi gị! Enwere m ndebiri nzaghachi maka nzaghachi email, enwere m ndebiri ngosi ka m wee ghara ịmalite ọhụụ maka ngosi ọ bụla, enwere m ndebiri ndebanye maka njikọ ọ bụla m na-arụ. Enweela m nnukwu akara na ndebiri ndebiri arụpụtara maka mbupụta saịtị na njikarịcha nke ndị ahịa. Ọ bụghị naanị na ọ na-azọpụta m ọtụtụ oge, ọ na-akawanye mma na ndị ahịa ọ bụla ka m na-emeziwanye ha oge.
N'ezie, ndebiri na-ewe ntakịrị oge ọzọ n'ihu… mana ha na-azọpụta gị akụnụba n'okporo ụzọ. Nke a bụ otu anyị si emepụta saịtị, na-emepe ha yana atụmanya na ị ga-eme mgbanwe mgbanwe n'izu na-abịa. Site na ịrụ ọrụ n'ihu, mgbanwe ndị dị n'okpuru na-ewe obere oge na mbọ.
Uzo ozo aturu anya nke anyi ji eme ihe bu ihe omuma ihe ndi mmadu na eme. Anyị na-anakọta mmelite, dozie ha na kalenda, ma wepụta oge mmelite otu afọ maka ụmụazụ ha ka ha gbarie. Ọ na-ewe otu ụbọchị ma ọ bụ karịa - ọ na - eju ndị ahịa anyị anya na anyị ewerela otu afọ na-eche ihe ha ga - eziga na ndepụta ha. PS: Anyị hụrụ onye nkwado anyị n'anya Agorapulse si nhọrọ maka kwụ n'ahịrị na ịhazi usoro mmelite mmekọrịta!
Gbuo Ọkara Nzukọ Gị
Ọtụtụ akụkọ ekwuola na ihe karịrị 50 pasent nke nzukọ adịghị mkpa. Legharịa anya na tebụl ọzọ oge ọzọ ị na-enwe nzukọ, chee echiche banyere ego a na-emefu na nzukọ ahụ na ụgwọ ọnwa, wee hụ nsonaazụ ya. Ọ bara uru? Ọ dịkarịsịrị.
E kereghị ọrụ nkà kachasị mma na nzukọ, ndị mmadụ. Ọ dị m nwute, mana imekọ ihe ọnụ na ọrụ azụmaahịa na-eweta nsonaazụ ọnụ ọgụgụ dị ala. Hired were ndị ọkachamara n'ọrụ iji nweta ọrụ ahụ, yabụ kewaa ma merie. Enwere m ike ịnweta akụrụngwa iri na abuo na-arụ ọrụ n'otu ọrụ ahụ - ọtụtụ oge - ọ naghị esiri m ike inweta ha niile n'otu oku ma ọ bụ n'otu ọnụ ụlọ. Anyị na-emepụta ọhụụ, wee kpochapụ ihe ndị dị mkpa iji ruo ebe ahụ, mgbe anyị na-eduzi okporo ụzọ iji belata nkwekọrịta.
Ọ bụrụ n’ị na-atụ anya ịga nzukọ, lee ndụmọdụ m:
Nanị nabata akwụkwọ ịkpọ òkù ọmụmụ ihe ma ọ bụrụ na onye ahụ kpọrọ gị akpọọ okwu ihe mere ha ji chọọ ka ị gaa. Arụrụ m ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ebe m si na nzukọ 40 kwa izu ruo 2 naanị mgbe m gwara ndị m enweghị ike ịbịa ọ gwụla ma ha kọwara ihe kpatara ya.
Naanị ịnakwere nzukọ na usoro nke akọwapụtara nke ọma ebum n’uche nke nzuko na oge nke akuku obula nke nzukọ. Usoro a na - egbu ọtụtụ nzukọ - ọkachasị nzukọ a na - eme ugboro ugboro.
Naanị ịnakwere nzukọ na onye nhazi nzukọ, onye na-edekọ oge na onye na-edekọ nzuko. Onye nhazi ahụ kwesịrị idobe akụkụ ọ bụla nke nzukọ ahụ na isiokwu, onye nhazi oge na-eme nzukọ na oge, onye na-edekọ ihe na-ekesa ndetu na atụmatụ ọrụ.
Naanị nabata nzukọ ndị ga-ejedebe na atụmatụ zuru ezu banyere onye ga-eme ihe, yana mgbe ha ga-eme ya. Wee mee ka ndị ahụ zaa ajụjụ - nloghachi na nzukọ nzuko gị dabere na ike ha mezue ihe emere ngwa ngwa. Zere ime ihe ndị otu na-eme… ọ bụrụ na mmadụ enweghị ọrụ, agaghị eme ya.
Ọ bụrụ na ọmụmụ 50 nke nzukọ bụ igbu oge, gịnị ga-eme izu ọrụ gị mgbe ị jụrụ ịga ọkara nke ha?
Outsource Ihe Su Na-amị
Oge ọ ga - ewe iji kụziere onwe gị otu esi eme ihe ma ọ bụ dozie nsogbu ị na - amabeghị bụ naanị ibibi arụmọrụ gị, ọ na - efu gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị nnukwu ego. Ọ bụrụ na ị bụ ọchụnta ego, ị na-akpata ego mgbe ị na-eme ihe ị kwesịrị ime. Ekwesịrị ịpụ na ihe ndị ọzọ na ndị mmekọ. Enwere m ọtụtụ ndị ọrụ ngo m na-akpọ maka ihe niile site na foto isi, na-ewu ozi ịntanetị, na nyocha nke ozi ọzọ anyị. Ndị otu ndị m chịkọtara bụ nke kachasị mma, na-akwụ ụgwọ nke ọma, anaghị ahapụ m. O were afọ iri ichikota ha, mana o ruru ya n'ihi na m na-elekwasị anya n'ihe na-eme ka azụmaahịa m na-aga nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, n'izu a, onye ahịa bịakwutere m okwu ha na-arụ ọrụ maka ọnwa. Otu mmepe ahụ ejirila ọtụtụ ọnwa rụọ ọrụ na iwulite sistemụ ma ha na - agwa onye nwe azụmaahịa ahụ na ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa iji dozie. N'ihi na amaara m njikọ ha na ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, amaara m na anyị nwere ike koodu ikikere maka obere. Maka narị dollar ole na ole, n'elu ikpo okwu ha abanyela ugbu a… yana nkwado na nkwalite. Ugbu a, otu ndị mmepe ha nwere ike ịhapụ ka ha rụọ ọrụ na isi okwu okwu.
Kedu ihe na-ewe gị ogologo oge iji wuchaa? Couldnye pụrụ inyere gị aka? Chọpụta ụzọ ị ga-esi akwụ ha ma ị ga-enwe obi ụtọ na ị mere!
Tags: na-anakọta nyochaihepịa mgbasa nkesaọnụ ọgụgụnghọta mmadụ
Oge maka oge udu mmiri nke atụmatụ ahia gị
Aug 10, 2009 na 8:02 PM
Daalụ maka nnukwu ego na Tungle. M na-eji ya ụbọchị ole na ole ugbu a ma ọ dị oke mma! Ana m arụ ọrụ site na kalenda Google dị iche iche maka biz, ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ, ụka, HOA na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yana ana m enweta ọtụtụ oku, ozi ịntanetị na SMS maka ndị chọrọ ịma ma m dị njikere izute. Dika m na enweta okwu nye ihe a nile, o gha aburiri oge buru ibu nyem ma olile anya ha.
BTW - enwere ngwa Ning maka nke a mana o nwere ahụhụ na ya na ụmụ okorobịa Tungle tech na-arụ ọrụ ugbu a. Ha na-ekwu na a ga-edozi ya n'ime ụbọchị ole na ole.
Aug 10, 2009 na 11:06 PM
Daalụ maka mkpu ahụ, Doug! Tungle abụwo nnukwu ọrụ maka m ma enwere m obi ụtọ na ị masịrị ya, kwa. Ana m atụ anya nzukọ anyị 🙂
Aug 27, 2009 na 3: 09 AM
Daalụ maka ịkpọtụ Tungle. Dị ka nnukwu ọrụ, anụwo m ọtụtụ mmadụ na-akọrọ ahụmịhe ha dị mma na ngwa ọrụ ahụ. O di ka m kwesiri igbali ya.